iimveliso Ababoneleli kunye Factory-China iimveliso China
I-2020 entsha yokufika kwee-panties umzimba we-shaper umthungo ongabonakaliyo wabafazi abancinci be-sexy butt lifter panties tummy control slimming body shaper
Ihip-up enye ye-3D-ngokokuma kobuso bomntu, isonga i-hip-ups ngeendlela ezahlukeneyo ngeendlela ezahlukeneyo zangaphantsi. Izixhobo eziphezulu kakhulu, azithintelwanga, akukho xinzelelo, akukho sigculelo. Ibhulukhwe inemigca efanelekileyo, ukungqubana okuzinzileyo, kunye nokuqina.
Ukuthengiswa okushushu kweAmazon kunye nobukhulu obuPhezulu beSinqe seBhloko
Ubungakanani besisu sokuphakamisa ibhulukhwe, ibhulukhwe ephezulu yeleyiti, isilwanyana esibhityileyo esincinci, uxinzelelo oluphindwe kabini esiswini, imiqolo emithathu kunye neebhanti ezisibhozo, ubume obuguqulwayo besisu. Ilaphu eliphakamileyo, elingaxinanga, lihlanganisa ngokufanelekileyo amanqatha amaninzi, iipasile ezine zesiponji ukunceda umzimba wakho ubume
Ubungakanani bamaNcinci amaBhabha amaqhosha akhawulezayo enza ibhulukhwe ephakamisa iibhutsi
Yakhelwe ngaphakathi-kwindawo enesiponji esithe tyaba-phezulu esenza iziqhoboshi ezinamandla ngakumbi nangokuthe ngqo. Ilaphu elingagudliswanga, lithambile kwaye linokuphefumla, iibhulukhwe zebhokisi yokwenene ayin-gudanga, uyilo olungahambelaniyo lomda, anti-nokukrwela, kunye nokuqengqeleka.